Mohammed Bin Salmaan oo afduubtay ina adeertiis Amiirad Basmah Bint Saud | Xaysimo
Home War Mohammed Bin Salmaan oo afduubtay ina adeertiis Amiirad Basmah Bint Saud
Mohammed Bin Salmaan oo afduubtay ina adeertiis Amiirad Basmah Bint Saud
Dhaxal-sugaha Sacuudiga Mohamed Bin Salman ayaa lagu warramay inuu afduubtay ina adeertiis Amiirad Basmah Bint Saud Bin Abdulaziz, taasi oo la la’aa muddo sanad ah, sida uu weriyey wargeyska ABC ee dalka Spain.
Sida uu qoray wargeyska, koox ka kooban sideed rag ah, ayaa 28-kii Febraayo 2019 yimid guriga Basmah ee magaalada Jeddad, xilli ay ayada iyo qoyskeeda isku diyaarinayeen inay arrimo caafimaad ugu safraan dalka Switzerland.
Wargeyska ayaa sheegay in Basmah, oo ku caan baxday u ololeynta xuquuqda dumarka iyo is-beddel siyaasadeed oo ka dhaca boqortooyada, kadib lagu xiray xabsiga Al-Hayer, oo muddo sanad ah ay ku jirto.
Ilo-wareedyo ku dhow Amiiradda ayaa wargeyska u sheegay in Basmah ay ku jirto qolka 108 B ee xabsiga, loona ogol yahay inay qoyskeeda la xiriirto hal mar oo kaliya toddobaadkii.
Amiiradda ayaa dalbaneysay in boqor Salman uu soo celiyo dhul uu lahaa aabaheed Saud Bin Abdulaziz oo ku yaalla magaalada Taif, iyo 2 bilyan oo dollar oo taalla akoono ku yaalla bankiyada Switzerland.
Wargeyska ABC ayaa intaas ku daray in ilo-wareedyo ku dhow Bin Nayef ay u sheegeen in Amiirad Basmah lagu hayn doono xabsiga illaa ay ka tanaasusho sheegashada hantida aabaheed.
Ilo-wareedyo ku dhow Basmah ayaa sheegay in loo xiray tuhunno ku saabsan inay qorsheyneysay inaysan soo laaban marka ay tagto Switzerland oo ay ugu socotay arrimo caafimaad, ayada oo ay wehliso gabar ay dhashay.